“Wuxuu doonayaa inuu nagula guulaysto Champions League ka hor inta uusan aadin Man City” – Franck Ribery – Gool FM
“Wuxuu doonayaa inuu nagula guulaysto Champions League ka hor inta uusan aadin Man City” – Franck Ribery
Liibaan Fantastic April 3, 2016
(Munich) 03 Abriil 2016 Laacibka kooxda Bayern Munich Franck Ribery ayaa daaha ka qaaday in tababare Pep Guardiola uu doonayo inuu ku guulaysto xiliciyaareed kan Champions League si uu ugu macsalaameeyo ciyaartoyda kooxdiisa.
Guardiola ayaa heshiis lagaaray Man city kaas oo bilaaban doona dhamaadka xiliciyaareed kan laakiin wixii ka horeeya wuxuu diirada saari doonaa koobka horyaalada yurub.
“Dabcan Guardiola wuxuu doonayaa inuu nagula guulaysto koobka horyaalada yurub, dhamaan koobabka maxaliga ah waa uu nagula guulaystay, dhamaanteen waxaan ku riyoonaynaa inuu nagula guulaysto koobka yurub xiliciyaareed kan ka hor inta uusan u dhaqaaqin Man City” ayuu yiri Franck Ribery.
“Tani waa kubadda cagta, wuxuu doonayaa inuu u dhaqaaqo Man City isaga oo ah horyaalka yurub, dhamaanteena sidaas ayaan doonaynaa, taasi waa riyadeena iyo riyadiisa”.
“Kooxdeenu si buuxda ayeey u awood badantahay, waxaan haysanaa ciyaartoy leh awood iyo masuuliyad ay horay ugu dhaqaajin karaan kooxda”.
Mar waxlaga waydiiyay kulanka ay laciyaari doonaan Benfica ayuu ku jawaabay:
“Kama horjeedno Real Madrid ama Barcelona laakiin waxaan ciyaareynaa kulan ka tirsan wareega rubuc dhamaadka sidaas darteed wuxuu noqon doonaa kulan adag”.
Jose Mourinho oo dalab yaab leh kala kulmaya dalka ay dagaalada ka socdaan ee Syria…(AQRI DALAB RASMI OO LOO SOO GUDBIYAY)